Harena mihoam-pampana no ao, hoy ny Pr James Ratsima. Hisy ny fikaonan-doha ho tanterahana ao amin’ny Akademia Malagasy mikasika izany. Azo hananganana ny lalana rehetra sy fotodrafitrasa misy eto Madagasikara io nosy io. Azo hananganana sekoly, izay fototra, satria ny tanora no hoavin’ny firenena. Azo hananganana EPP isaky ny fokontany, lisea isaky ny kaominina, oniversite isaky ny distrika, azo hananganana zavatra maro io. Raha tokony hanao izany anefa ny fitondram-panjakana dia ny mitifitra ny mpianatra no ataony amin’izao fotoana izao. Fantatro ny marina. Fantatro ilay zandary nanome baiko sy nitifitra. Miandry azy ireo hiteny aho fa rehefa tsy hiteny izy dia tsy maintsy hivoaka izany, hoy hatrany ny Pr Ratsima.